Linn Ko: November 2013
Today, after having recently posted my iOS 7.0.4 Jailbreak tutorial for the iPhone4usingatool called RageBreak, I’ve decided to create another in-depth guide on the utility for Windows users. As with the previous tutorial, RageBreak is simply based on winocm’s opensn0w
Libon ဆိုတဲ့ Software ကို အကိုတစ်ယောက်က ညွန်ပေးလို့ စမ်းကြည့်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
သူကတော့ အကောင့်ဖွင့်ပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများကို ဖုန်း တစ်နာ၇ီ Free ပြောလို့ရပါတယ်
(You can call oversea call for 1 hour over internet and call receiver is not need internet connection)
Download Apk Here (46.5 MB)
Posted by Linn Ko at 12:29 PM No comments:
Android ဖုန်းမှာ ဖိုင်တွေကို Share လုပ်တဲ့နေရာမှာ အမြန်ဆုံး application ဖြစ်တဲ့ Super Zapya V 1.8.3 (CN) လေးပါ။
Posted by Linn Ko at 11:49 AM No comments:
Dropbox Link မှဒေါင်းရန်
Box Link မှဒေါင်းရန်
ဒီအောက်ကကောင်လေးပါ Install လုပ်မှ Pro ဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Linn Ko at 11:48 AM No comments:
ဘယ်လိုမှလိုက့်မမှီတောတဲ့ Facebook Update ပါ …၃ရက်ကိုတခါလောက် Update
ထွက်နေတယ်ဒီနေ့မနက်စောပိုင်းကလဲ 5.0.0.6 တဲ့ဆွဲလိုက်ကြအုံးဘော်ဒါတို့ရေ …
Android version 4.2.1 အတွက် Google App သွင်းလို့ရတဲ့ Apk လေးကို
MMSD ကနေ Free မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဒီ APK မှာပါတဲ့ Function နှစ်ခုကတော့ Delete Now နဲ့ Install Now ပါ။
Camera FV-5 isaprofessional camera application for mobile devices, that puts DSLR-like manual controls in your fingertips. Tailored to enthusiast and professional photographers, with this camera application you can capture the best raw photographs so that you can
Posted by Linn Ko at 4:22 PM No comments:
The easiest, simplest, and fastest way to connect with your friends by clicking on their picture!!!
With Contacts Dialer you can contact your friends through Facebook, WhatsApp, Google Talk, Skype, Viber, SMS, Email and Call – all under same roof , and of course … Beautiful contacts
Posted by Linn Ko at 4:20 PM No comments:
[ About SWF Player ] You can play .swf file by this Player. [ How To install Flash Plugin ] You need to install Adobe Flash Player Plugin before using this player.
Myanmar Keyboard for iOS Device (Can Directly go to SMS, Facebook, Twitter and Mail)
Me Note ဆိုတာ iOS Device တွေမှာ မြန်မာစာ ရိုက်လို့ရတဲ့ Keyboard ပါဝင်ပြီ: Note မှတ်လို့ရတဲ့ App လေး တစ်ခုပါ ။ အဲ့ဒီ့ မှာ မြန်မာလို ရိုက်ပြီ ရိုက်ထားတဲ့ စာသားတွေကို Facebook , Twitter , Mail , SMS တို့စီ တစ်ခါထဲ တန်း တင်လို့ရပါတယ် ။
နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာစာစနစ်မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာစာစနစ် (Myanmar Language) မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတစ်ချို့တွေအတွက် Samsung Zawgyi Enabler လို့ခေါ်တဲ့ Android ဖုန်းဆော့ဝဲလေး တစ်ခုကို
Posted by Linn Ko at 10:24 AM No comments:
Links for Free Download the Android Apks.... ( Some are Paid App)
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်ပေးမှာက ကျွန်တော် တင်နေတယ့် Android နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို ရယူလေ့ ရှိတယ့် Link လေးတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်... အမြဲတမ်းလည်း Full Version, Pro Version, Paid Version တွေပဲ တင်လေ့ရှိတယ့် Link လေးတွေနဲ့ အသစ်လေးတွေ အမြဲတင်နေတတ်တယ့် Link လေးတွေကို
Download Apk HERE (19.1 MB)
Download Data HERE (955.5 MB)
Requrie android 2.2 or higher
Download Apk Here (40 MB )
Install Apk and Download the Data
ဒီ Apk လေးထဲမှာ
Tab ၃ ခု ပါ, ပါတယ် ။
မရှိသေးသူတွေအတွက် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရုပ်ပုံလေးတွေကို Copy လုပ်ပီး Facebook , SMS တွေမှာ Paste လုပ်ပီး ပို့လို့ရပါတယ်။
Posted by Linn Ko at 10:12 AM No comments:
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးလဲ လန့်မသွားနဲ့ ဦးနော်
ဒီ ဂိမ်း လေးက သေနတ်တွေကို တစ်စစီ ဖြုတ်ပြီး ကလိလို့ရလို့ ကလိချင်တဲ့သူတွေအတွက်လို့ပြောတာပါ
ဒီဂိမ်းလေးက ပြောရမယ်ဆိုရင် ပစ်ခတ်ဆော့ကစားရတဲ့ သေနတ်ပစ်ဂိမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီဂိမ်းလေးက ကျွန်တော့ဆီမှာရှိတာ နဲနဲကြာပါပြီ ။ တချို့ မသိတဲ့သူတွေရှိမယ်ထင်လို့ ပြန်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဖိုက်တာဖွားဖွားကတော့ အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်အောင် ပြုလုပ်ရမှာပါ ။
Posted by Linn Ko at 12:47 PM No comments:
11လပိုင်း 22 ရက်နေ့ ထွက် Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ ဖုန်း Player ကနေ ကြည့်တဲ့နည်းကလေး မျှဝေချင်ပါတယ်
IOS7တွေအတွက် မြန်မာကီးဘုတ်လေးထွက်လာပါပြီ။
Developer ကတော့ KO Hein thet Khin zaw ဖြစ်ပါတယ်...iOS7အထက် Devices များမှ
မြန်မာလို Messages များ ၊ Facebook Status များ ၊ Email များ၊ Twitter များ အား မြန်မာ Keyboard
Posted by Linn Ko at 12:41 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 10:44 AM No comments:
Require Android 3.0 or Higher
Require Android 4.0 or Higher
Various Size depend on the Device
Check and Download from HERE
Posted by Linn Ko at 3:15 PM No comments:
Functionally the same as the Cyanogenmod cLock widget and brought to you by the same developer, this independently released, standalone widget takes back its original name,
Posted by Linn Ko at 1:14 PM No comments:
Making Original System Myanmar Fonts for Android Device
Post By – https://www.facebook.com/AMOz5 (Myanmar Mobile Users Group)
ကဲ. … Viber ဆော့ဝဲထဲက.ဝယ်ခိုင်းတဲ Viber stickers လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ၈ခုလား ဘယ်နှခုလဲ သိတော့ဘူး. သေချာတာတော့ ၇ခုကျော်တယ်.. ဟီးးး.
Baidu Root for Android (Root your android device with APK)
Android ဖုန်း/Tablet တွေကို One Click နဲ့ Root လုပ်လို့ရတဲ့ ကွန်ပျူတာ Tool တွေထဲမှာဆိုရင် V Root ကအစွမ်းဆုံးပါပဲ။ အခုတော့ V Root လိုပဲ ဖုန်းပေါင်းစုံကို Root လုပ်နိုင်တဲ့ Root Tool လေးဖြစ်တဲ့ Baidu Root လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Baidu Root ဆော့ဝဲလေးကတော့ ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲမဟုတ်ဘဲ
Posted by Linn Ko at 12:17 PM No comments:
DiskDigger Pro for Root User (Android Recovery Software)
DiskDigger ဆောစ့်ဝဲလ်လေးကတော့ ဖုန်းမှာ မှားဖျက်မိတဲ့
Data တွေကို ပြန်ရှာပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ သူကို အသုံးပြုဖို့အတွက်
မိမိဖုန်းက Root ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ် အဲဒါဆို အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ
Next Launcher နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုမယ့် Theme အလန်းလေးပါ
Next Launcher အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
Mirrorcreator (or) Zippyshare (or) Pc.cd
ProMyanKey လို့ လူသိများခဲ့တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်လေးဟာ အခုဆိုရင် နောက်ဗားရှင်းအသစ်